बाइबलका कथाहरू: इस्राएलको अन्तिम असल राजा - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अटेसो अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आएमारा आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उइघुर (अरबी) उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन एस्टोनियन साङ्केतिक भाषा ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा काचिन काजाक काबाइली काबार्डिन-सर्केस काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी केक्ची कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुना गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चुभास चेक चेक साङ्केतिक भाषा जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिभ टेटन डिली टोंगन डच डच साङ्केतिक भाषा डाँग्मे डेनिश ड्रेहु ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) निऊ निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नुएर नेपाली नोंगा न्यानेका पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बम्बारा बाओले बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिस्किटो मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेन्डे म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाओशियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुभेल लो जर्मन वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलफ वोलाइटा शोना श्वा सर्बियन साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
इस्राएलको दुई गोत्रे राज्यको राजा बन्दा योशियाह आठ वर्षको मात्र थियो। उसको उमेर धेरै कम भएकोले सुरुसुरुमा ठूलो उमेरका मान्छेहरूले उसलाई राज्य चलाउन मदत गर्छन्।
आफू राजा भएको सात वर्षपछि योशियाहले यहोवाको खोजी गर्न थाल्छ। उसले दाऊद, यहोशापात र हिजकियाहजस्ता असल राजाहरूको सिको गर्छ। किशोरावस्थामै छँदा योशियाहले एउटा साहसी काम गर्छ।
इस्राएलीहरूले खराब काम गर्न थालेको निकै लामो समय भइसकेको थियो। उनीहरू झूटा देवताहरूको उपासना गर्थे। उनीहरू मूर्तिलाई ढोग्थे। यसकारण योशियाहले आफ्नो देशबाट झूटो उपासना हटाउन सुरु गर्छ। यो चानचुने काम थिएन। किनभने झूटा देवताहरूको उपासना गर्ने थुप्रै मान्छेहरू थिए। चित्रमा हेर त। योशियाह र उसका मान्छेहरूले मूर्तिहरू फोड्दैछन्।
यसपछि यहोवाको मन्दिरको मर्मत गर्न योशियाहले तीन जना मान्छे खटाउँछ। मन्दिरको मर्मत गर्न मान्छेहरूबाट पैसा जम्मा गरिन्छ र त्यो पैसा ती तीन जनालाई दिइन्छ। मन्दिरमा काम गरिरहेको बेलामा प्रधान पूजाहारी हिल्कियाहले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा फेला पार्छ। उसले फेला पारेको त्यो कुरा यहोवाले धेरै वर्षअघि मोशालाई लेख्न लाउनुभएका नियमहरूको किताब थियो। यो किताब हराएको धेरै वर्ष भइसकेको थियो।
त्यसपछि त्यो किताबलाई योशियाहकहाँ लगिन्छ अनि उसले त्यसलाई पढ्न लगाउँछ। किताबमा भएका कुराहरू सुन्दै जाँदा मान्छेहरूले यहोवाका आज्ञाहरू पालन गरेका रहेनछन् भनी उसलाई थाह हुन्छ। ऊ असाध्यै दुःखी हुन्छ र आफूले लगाएको लुगासमेत च्यात्छ। चित्रमा हेर त। त्यसपछि उसले यसो भन्छ: ‘यहोवा हामीसित रिसाउनुभएको छ। किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले यो किताबमा लेखिएका आज्ञाहरू पालन गरेनन्।’
अब यहोवाले के गर्नुहुनेछ भनेर पत्ता लगाउन योशियाहले हिल्कियाहलाई अह्राउँछ। हिल्कियाहले अगमवादिनी हुल्दाकहाँ गएर सोध्छ। ऊ योशियाहलाई यहोवाको यस्तो खबर पठाउँछे: ‘यरूशलेम र त्यहाँका जम्मै मान्छेहरूलाई दण्ड दिइनेछ। किनभने उनीहरूले झूटा देवताहरूको उपासना गरेका छन् र देशलाई नराम्रो कामले भरेका छन्। तर तिमी योशियाहले चाहिं असल काम गरेको हुनाले तिमी मरेपछि मात्र यो दण्ड दिइनेछ।’
२ इतिहास ३४:१-२८.
योशियाह राजा हुँदा कति वर्षको थियो र राजा भएको सात वर्षपछि उसले के गर्न थाल्छ?
पहिलो चित्रमा योशियाह के गर्दैछ?
मन्दिरको मर्मत गरिरहेको बेला प्रधान पूजाहारीले के फेला पार्छ?
योशियाह किन आफ्नो लुगा च्यात्छ?
अगमवादिनी हुल्दाले यहोवाको के भविष्यवाणी योशियाहलाई सुनाउँछे?
दोस्रो इतिहास ३४:१-२८ पढ्नुहोस्।
खराब वातावरणबीच हुर्कनुपरेका मानिसहरूका लागि योशियाह किन असल उदाहरण हो? (२ इति. ३३:२१-२५; ३४:१, २; भज. २७:१०)
आफ्नो शासनको ८ औं, १२ औं अनि १८ औं वर्षमा साँचो उपासनालाई बढाउन योशियाहले के-कस्ता कदम चाल्यो? (२ इति. ३४:३, ८)
उपासना गर्ने ठाउँको सम्भार गर्ने सम्बन्धमा राजा योशियाह र प्रधान पूजाहारी हिल्कियाहले हाम्रो लागि कस्तो उदाहरण बसाले? (२ इति. ३४:९-१३; हितो. ११:१४; १ कोरि. १०:३१)